ဘယ်လိုနေရမလဲ Candy မသိတော့ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်လိုနေရမလဲ Candy မသိတော့ဘူး
ဘယ်လိုနေရမလဲ Candy မသိတော့ဘူး
Posted by ပန်းနု on Jun 21, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 34 comments
cultural shock homesick
ကိုယ်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါ ဘ၀က အိပ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်။
ညည အိပ်မက်ထဲမှာတော့ အရင်နေရာမှာ အရင်အတိုင်းရှိနေခဲ့တယ်။
မနက်နိုးလာလို့ မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်ကတည်းက သြော် ငါသွားလာနေကျနေရာမဟုတ်ပါလားဆိုပြီး အားငယ် ၀မ်းနည်းသွားရတယ်။
အခုဆိုရင် အမိမြေနဲ့ခွဲခွါခဲ့ရတာ ၄ရက်ရှိပြီ နေသားမကျသေးပါဘူး။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေကြလည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
အကောင်းမေးနေတာကို ဘဘကြောင်ကြီး ကို့ယို့ကားယားမလုပ်ပါနဲ့
၁လ ကျော် ၁နှစ်လောက် ဖြစ်သွားရင် ချစ်သူ အသစ်နဲ့ အိမ်က လူတောင် မေ့ချင် မေ့သွားမလား တောင် မသိဘူး။
အိမ်နဲ့ စခွဲခါစကတော့ အိမ်လွမ်းတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
နောက်မှ အိမ်ပြန်ချင်တော့ဘူး လာလုပ်နဲ့ 
Candy ရေ ဒီလိုပါပဲ ။ နေရာအသစ် ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်ကိုရောက်ခါစမှ ခံစားနေရတာက အခုလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ နေရတဲ့ နေ့ရက်တွေ အချိန်တွေကြာသွားရင် နေသားကျသွားမှာပါ …
နောက်ကြ မှ …. သန့် ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ နေရာ ။ စည်းကမ်းအရမ်းရှိတဲ့ နေရာ ။ နိုင်ငံ ကြီးသား ပီသ တဲ့ နေရာ ပါပဲ ဆိုပြီး ..ဆိုပြီး…ဆိုပြီး ။
၄ ရက်ထဲရှိသေးတာကိုး … ၄ နှစ်ပြည့်ပြီးရင်တော့ ပြန်ချင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး …
ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်စီနဲ့ အမိနိုင်ငံကထွက်လာကြတယ် .. အားငယ်တဲ့အချိန် စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုတိုးတက်စေမယ့် စာတွေဖတ် အလုပ်တွေနဲ့ မအားလပ်နိုင်အောင်နေ … သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် အားတဲ့အချိန်မှာ အပြင်ထွက်လည် … မိဘတွေနဲ့ဝေးချိန်မှာ အကောင်းစုံး အဖော်မွန်က သူငယ်ချင်းတွေပဲ အကောင်းအဆိုးတိုင်ပင် … တစ်ယောက်ထဲနေတာထက်စာရင် နဲနဲတော့ စိတ်သက်သာရာ ရမှာပါ …
ဟုတ်ပါတယ် အိမ်နဲ့ခွဲပြီး တနိုင်ငံမှာ လာနေရတဲ့ pinkcandy ကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ။
ကိုယ့်အလှည့်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တာပဲ ၁ လ ၂ လ လောက်တော့ ငိုလိုက် ရယ်လိုက်နဲ့ ပြီးသွားတာပဲပေါ့ ။သတိရလို့ ငိုချင်လာရင် ငိုပစ်လိုက် ပါ ။ စ်ိတ်ထဲ တင်းမထားပါနဲ့။
Snowy ပြောသလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း တိုင်ပင် ပြောပြ ပါ။ စကားပြောပေးပါ ။
တယောက်ထဲနေရင် ငိုပဲငိုနေမိလိမ့်မယ်။ Pinkcandy ကိုဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော် ။
ချစ်ကလည်း ရောက်တာမှ တနှစ်မပြည့်သေးပါဘူး။ ရောက်ခါစ လတွေကဆို ငိုပဲ ငိုပြီး အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တာ။
အခုတော့လည်း အဆင်ပြေသွားပါပီ လေ ။ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲလေ …. စိတ်ထဲမှာ ငါ ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့လည်း ကိုယ့်ဘာသာ အားပေးပေါ့ …
ခဏလေးကြာရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော် …..
စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဖိစီးစရာများတယ်။ စားရတာ အဆင်မပြေဘူး။ အစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ နားမဆန့်အောင် ကြားနေရပေမယ့်လည်း ဒီကိစ္စတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အခုလက်ရှိအနေအထားထက် အဆင်ပြေမှာ ယုံကြည်တဲ့ အတွက် ဒါတွေတွေ့ရန် အလွန်အမင်းသွားချင်နေကြောင်းပါ။
အခုခေတ်ကြီးက အင်တာနက်ခေတ်ပဲ အရင်လို စာစောင့် ဖုန်းမျှော်လုပ်စရာ မလိုတဲ့ အတွက် home sick ဒီလောက်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးက တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေမယ်။ အိမ်နဲ့ အင်တာနက်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်၊ ကျောင်းတက်ချိန်ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်ချိန်လုပ်၊ အတွေ့အကြုံတွေ ရွာထဲစာရေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ကင်းမြီးကောက်ထောင်နေ … အဟဲ နောက်တာပါ … ။
သွားရင် အဲ့ဒီလို တွေဖြစ်တတ်မှန်း အစကတည်းက တွေးခဲ့သင့်တလေ… ။ရောက်သွားပြီးပြီဆိုမှတော့ …ပြန်တွေးမနေနဲ့ …. ။ နောက်တော့လည်း နေသားကျသွားမှာပါ … ။
အားပေးတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဟိုနေ့က IT show ဘယ်တော့ပြီးမလဲမေးတာကိုး ….
ထင်တော့ထင်သားဘဲ …။ မရောက်သေးတဲ့နေရာတွေ ရောက်သင့်တဲ့နေရာတွေ အချိန်ရရင်သွားလည်ပေါ့ဗျာ ..။ လေ့လာမှုတွေစအုံးပေါ့ အခန်းတော့ မအောင်းနဲ့နော် ..။
လျှောက်သွားတာများသွားလို့ MRTကဒ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေ တောင်ပံပေါက်ကုန်ပြီ လေးလေးဖက်ရေ
(၁) လလောက်ဆို နေသားကျသွားမှာပါ။ရုပ်ရှင်ကြည့်နေ http://www.burmeseclassic.com/dailymovie.php . စာအုပ်ဖတ်နေပေါ့ ။
ထပ်ကြာတော့… အပျော်တွေလွန်ပြီး… ပျက်တဲ့ဖက်ရောက်သတဲ့..။
ဂျပန်မှာ ..အလုပ်ကြမ်းနဲ့..ထောင်ဒဏ်ကျသလိုနေရတဲ့… ၁၀နှစ်အတိုင်းအတာကို ပြောကြတာပါ.။
စင်္ကာပူနဲ့ မတူတာက… ဂျပန်က အခြေချနေထိုင်ဖို့..အင်မတန်ခက်ပါတယ်..။
ကြာရင်..စင်္ကာပူရီယန်ကြီးဖြစ်ပြိး.. မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ..ပျောက်သွားတာမျိုး..။
ပျင်း-ပျော် လောက်ဆိုတော်ပါပြီ သူကြီးရယ်
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အမိမြေကခွါခဲ့ပေမယ့် အမိမြေမှာပဲ ခေါင်းချဖို့စိတ်ကူးပါတယ်။
အလုပ်ထဲသာ အာရုံစူးစိုက်ပြီး လုပ်နေလိုက်ပါ
သိပ်မတွေးပါနဲ့ …. နောက်တော့လည်း နေသားကျသွားမှာပါ … ။
ကြာရင်ပျော်သွားမှာပါ ညီမလေးရယ် …
ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါ …
ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရ ဆိုသလို
ပျော်ရွှင်တဲ့ နေရာမှာ နေချင်မှ နေရမယ် ဒါပေမယ့် ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပျော်အောင်နေကြည့်ပါ
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိရင် ကိုယ့်အတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် စာအုပ်စာပေတွေဖတ်ရှု့ပါ (သူများသာ ပြောနေတယ် ကိုယ်တောင် ဖတ်စရာ စာအုပ်မရှိ) … အပျင်းအပြေ မိဘဆွေမျိုး/သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောပါ … ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ကို အထာကျအောင် လေ့လာကြည့်ပါ … သူတို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် နေထိုင်ပါ … ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ … သူငယ်ချင်းအသစ်တွေကို သေချာလေ့လာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ … မသွားသင့် မသွားအပ် မပေါင်းသင့် မပေါင်းအပ် မလုပ်သင့် မလုပ်အပ် အစရှိတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ (တစ်ချို့တွေက သိတာသိတာ မကျင့်ကြဘူး တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ခွှင့်လွှတ်ကြပါ .. ဟီးးးးး :P) ကိုယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ကျင့်ကြံ နေထိုင်ပါ .. အင်း တော်တော် များနေပီထင်တယ် …. အခုမှပဲ ကြည့်မိတယ် အဖေက သမီးကို ခရီးသွားခါနီး ဆုံးမနေတာကြနေတာပဲ
မိဘတွေသွားလို့ မလွဲသာလို့ နေရတာဆိုရင်လည်း..ပိုပြီး..လေ့လာစရာတွေ..အများကြီးပါ။
ဖေကြီးကင်း နဲ့ အန်တီမိုး တို့ရဲ့ အဆုံးအမကို နာခံလျှက်ပါ။
အင်း ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ
သမီးမိန်းကလေးရှိပြီဆိုပြန်တော့ အရင်လို ပေါက်ကရ နေလို့မဖြစ်ပြန်တော့ဘူးးးးး
အတည်အတံ့ပဲ လုပ်ရတော့မှာပါလား …. :D
ကြည့်ရတာအိမ်နဲ့ တခါမှ အကြာကြီး ခွဲမနေဘူးဘူး ထင်တယ်။ first time မှာတော့ ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကိုဖြေဖို့ ကိုနှစ်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတခုဘက်ကို သတိရတိုင်းအာရုံ ပြောင်းပေးသင့်တယ်ထင်ထယ်။
ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့ ခုလက်ရှိ ရောက်ရှိနေတဲ့ဝန်းကျင်ကို အရင်ဆုံး လေ့လာပါ။ လိုက်လျောညီထွေရှိမယ့်သူတွေနဲ့ အရင်ဆုံးမိတ်ဖွဲ့ပါ။ နောက် ၀န်းကျင်အသစ်မှာ ပျော်မွေ့အောင် နေကြည့်ပါ။ အိမ်ကို မကြာမကြာ ဖုန်းဆက်ပေါ့။ ၀န်းကျင်သစ်မှာ ပျော်မွေ့ဖို့ ကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေအောင် နေကြည့်ပြီး ပိတ်ရက်တွေမှာ အနီးဝန်းကျင်ကို သွားလည်ပေးပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေတတ်သွားမှာပါ။ လောကကြီးမှာ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါဆိုတဲ့ မနောရဲ့ လက်ကိုင်စကားလေးကို လက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဟုတ်ကဲ့ candy ကြိုးစားပြီး အသားကျအောင် နေကြည့်နေပါတယ်ရှင့်။
အခုလို အားပေးစကားပြောတဲ့သူတွေရော လက်ကိုင်စကားလေးပြောပြပေးတဲ့ မမ မနောကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွာထဲကို နေ့တိုင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ အခုလို ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း စည်းလုံးပြီး တစ်ယောက်အပူကို တစ်ယောက် စာနာပေးတတ်သလို တစ်ယောက်ပြသနာကို တစ်ယောက်ဖြေရှင်းပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေကို သဘောကျလို့ပါ။
သမီးရဲ့ Facebook အကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် .. Gmail လိပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ် သိချင်ပါတယ်..
ဖေကြီး Gmail ကတော့ ecpgdma11@gmail.com ပါ သမီးလေး
လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရှိရင်ပြောပါ တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီပေးပါ့မယ် …
ကြိုစားထား …. :D
google browsing လုပ်ပြီး ရလာသော data များအရ ဖေကြီးကင်းသည် သမီးထက် ၃နှစ်ငယ်၏
အဖေ့ထက် သမီး ၃ နှစ်ကြီး၏
” ခေတ်သစ် ” ….. :D
နေရာအသစ်မှာ အရင်ဆုံး ပြုပြင်ရမှာက အစားအသောက်ပါပဲ။ ကိုယ့်အရင်ဝန်းကျင်က အစာနဲ့ မတူတာကို အရင်ကြုံရမယ်။ နောက် ရောက်ရှိနေတဲ့ဝန်းကျင်လေ့လာပြီးမှ ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းကို ရှာဖွေပါ။ နောက် တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာ ကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင် ကျောင်းစာပေါ့ အလုပ်ဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာ သီချင်းနားထောင်တာတို့ ဘာတို့ စိတ်ကို အာရုံတစ်ခုရောက်နေတဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရသလို ညပိုင်း တရားထိုင်ကြည့်ပါ။ အေးချမ်းမှုကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
စီနီယာတွေက တစ်ယောက်တစ်မျိုးအားပေးကြပြီးသားဆိုတော့ အထူးထပ်အားပေးစရာမလိုတော့လောက်ပါဘူးလေ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပေါ့